Greta Thunberg: ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ် ယခုချက်ချင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် အရေးပေါ်ကိစ္စ။ - English-Video.net
Greta Thunberg - Climate activist
Greta Thunberg isaSwedish climate activist.
In August 2018, Greta Thunberg startedaschool strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future.
Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United Nations COP24 in Katowice, Poland, where she addressed the Secretary-General and madeaplenary speech that went viral and was shared many million times around the globe. In January 2019 she was invited to the World Economic Forum in Davos where her speeches again madeaworldwide impact.
Thunberg tries to livealow-carbon life. Therefore she is vegan, and she doesn't fly. She has been named as one of the worlds most influential teens by TIME magazine.
Greta Thunberg | Speaker | TED.com
Greta Thunberg: ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ် ယခုချက်ချင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် အရေးပေါ်ကိစ္စ။
ဒီလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရန် တက်ကြွစွာနိုးဆော်မှုမှာ ၁၆နှစ်အရွယ် ရာသီဥတုအရေးလုပ်ရှားသူ ဂရဲတား ချွန်းဘက်က သြဂုတ် ၂၀၁၈မှာ ဘာကြောင့် သူမ ကျောင်းမတက်ဘဲ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအသိကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် ဆွီဒင်လွှတ်တော်ရှေ့မှာ သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြပွဲကိုစီစဥ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ယူခဲ့သလဲ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ''ရာသီဥတု အရေးပေါ် ပြဿနာက ဖြေရှင်းပြီးသားပါ။ ကျွန်မတို့မှာ အချက်အလက်တွေရော ဖြေရှင်းနည်းတွေရော ရှိပြီးသားပါ၊ ကျွန်မတို့ လုပ်ဖို့လိုတာက နိုးထပြီး ပြောင်းလဲဖို့ပဲ''၊ ''လို့ ဂရဲတား ချွန်းဘက် ကပြောတယ်။ '
Greta Thunberg isaSwedish climate activist. Full bio
When I was about eight years old,
ကျွန်မ အသက် ၈နှစ်တုန်းက စပြီး
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု သို့ ကမ္ဘာကြီး
I first heard about something
called climate change or global warming.
Apparently, that was something
humans have created by our way of living.
I was told to turn off
the lights to save energy
and to recycle paper to save resources.
that it was very strange
that humans, who are
an animal species among others,
could be capable of changing
the Earth's climate.
Because if we were,
and if it was really happening,
တကယ်သာ အဲ့တာ ဖြစ်နေတာအမှန်ဆိုရင်
we wouldn't be talking
about anything else.
As soon as you'd turn on the TV,
everything would be about that.
Headlines, radio, newspapers,
သတင်းခေါင်းစီးကြီးတွေ၊ ရေဒီယို၊ သတင်းစာတွေ
you would never read or hear
about anything else,
တခြားအကြောင်းတွေ ဖတ်ရကြားရမှာ မဟုတ်ဘူး..
as if there wasaworld war going on.
But no one ever talked about it.
တကယ်က ဘယ်သူမှ ပြောမနေဘူး။
If burning fossil fuels was so bad
that it threatened our very existence,
how could we just continue like before?
Why were there no restrictions?
ဘာလို့ တားဆီးမှုတွေ မရှိတာလဲ။
Why wasn't it made illegal?
ဘာလို့ တရားမဝင်ဘူးလို့ မသတ်မှတ်တာလဲ။
To me, that did not add up.
It was too unreal.
So when I was 11, I became ill.
ဒါနဲ့ ကျွန်မ အသက် ၁၁နှစ်
I fell into depression,
I stopped talking,
and I stopped eating.
In two months, I lost
about 10 kilos of weight.
၂လအတွင်း ၁၀ကီလိုလောက် ဝိတ်ကျသွားတယ်။
Later on, I was diagnosed
with Asperger syndrome,
နောက်တော့ ကျွန်မမှာ Asperger syndrome
OCD and selective mutism.
OCD နဲ့ selective mutism
That basically means I only speak
when I think it's necessary -
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ကျွန်မ စကားပြောဖို့
အခုက အဲ့လိုပြောဖို့ လိုအပ်တဲ့အချိန်ပဲ။
For those of us who are on the spectrum,
almost everything is black or white.
အရာအားလုံးနီးပါးက အဖြူနဲ့ အမည်းပဲ။
We aren't very good at lying,
ကျွန်မတို့က လိမ်တာလည်း မတော်ဘူး။
and we usually don't enjoy
participating in this social game
that the rest of you seem so fond of.
I think in many ways
that we autistic are the normal ones,
ကျွန်မတို့ autistic တွေက
and the rest of the people
are pretty strange,
the sustainability crisis,
နိုင်ရေး ပြဿနာ မှာပေါ့။
where everyone keeps saying
climate change is an existential threat
and the most important issue of all,
and yet they just carry on like before.
I don't understand that,
because if the emissions have to stop,
then we must stop the emissions.
ကျွန်မတို့တွေ မီးခိုးထွက်နေတာ ရပ်ရမယ်။
To me that is black or white.
ကျွန်မအတွက်တော့ အဖြူ(သို့) အမည်းပဲ။
There are no gray areas
when it comes to survival.
ရှင်သန်ဖို့အတွက်မှာ မီးခိုးရောင် မရှိဘူး။
Either we go on
asacivilization or we don't.
Rich countries like Sweden
need to start reducing emissions
by at least 15 percent every year.
နှစ်စဉ် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ဆိုတာအနည်းဆုံးပဲ။
And that is so that we can stay
belowatwo-degree warming target.
ဒါက ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှု သတ်မှတ်ချက်
၂ ဒီဂရီအောက်မှာ နေနိုင်ဖို့ပါ။
Yet, as the IPCC
have recently demonstrated,
ဒါပေမယ့် IPCC က များမက​ကြာ
aiming instead for 1.5 degrees Celsius
ဒီအစား သတ်မှတ်ချက် ၁.၅ ဒီဂရီ ထားခြင်းက
reduce the climate impacts.
what that means for reducing emissions.
You would think the media
and every one of our leaders
would be talking about nothing else,
but they never even mention it.
ဒါပေမဲ့ သူတို့အရေးတောင် မလုပ်ဘူး။
Nor does anyone ever mention
already locked in the system.
Nor that air pollution is hidingawarming
ဆက်ဖုံးထားမှာ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်း၊
so that when we stop burning fossil fuels,
we already have an extra level of warming
perhaps as high as
0.5 to 1.1 degrees Celsius.
၀.၅ ကနေ ၁.၁ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရက် လောက်အထိပေါ့။
Furthermore does hardly
anyone speak about the fact
ပြီးတော့ ဘယ်သူမှပြောမနေကြတဲ့ နောက်တစ်ချက်က
that we are in the midst
of the sixth mass extinction,
မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၀၀ လောက်နဲ့အတူ
with up to 200 species
going extinct every single day,
ကျွန်မတို့ဟာ ဆဌမ အစုလိုက် မျိုးသုဉ်း
that the extinction rate today
is between 1,000 and 10,000 times higher
အဆ ၁၀၀၀ ကနေ ၁၀၀၀၀
than what is seen as normal.
Nor does hardly anyone ever speak about
the aspect of equity or climate justice,
ညီမျှမှုရှုထောင့်နဲ့ ရာသီဥတု တရားမျှတမှု။
clearly stated everywhere
in the Paris Agreement,
which is absolutely necessary
to make it work onaglobal scale.
That means that rich countries
need to get down to zero emissions
within6to 12 years,
with today's emission speed.
And that is so that people
can haveachance to heighten
their standard of living
by building some of the infrastructure
that we have already built,
such as roads, schools, hospitals,
ဥပမာ လမ်းတို့၊ ကျောင်းတို့၊ ဆေးရုံတို့
clean drinking water,
electricity, and so on.
အကြောင်းက ကျွန်မတို့တွေ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး
Because how can we expect
countries like India or Nigeria
အိန္ဒိ ယတို့၊ နိုင်ဂျီးရီးယား
to care about the climate crisis
if we who already have everything
don't care evenasecond about it
or our actual commitments
to the Paris Agreement?
So, why are we not reducing our emissions?
ဒါဆို ဘာလို့ ကျွန်မတို့တွေ
Why are they in fact still increasing?
Are we knowingly causing
a mass extinction?
သိသိကြီးနဲ့ အစုလိုက် အပြုံလိုက်
Are we evil?
People keep doing what they do
because the vast majority
about the actual consequences
of our everyday life,
and they don't know
that rapid change is required.
လျှင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်တယ်
ဆိုတာတို့ကို မသိကြလို့ ဖြစ်တယ်။
We all think we know,
and we all think everybody knows,
Because how could we?
အကြောင်းက ဘယ်လိုလို့ သိနိုင်မှာလဲ။
If there really wasacrisis,
and if this crisis was caused
by our emissions,
you would at least see some signs.
Not just flooded cities,
tens of thousands of dead people,
and whole nations leveled
to piles of torn down buildings.
You would see some restrictions.
And no one talks about it.
There are no emergency meetings,
no headlines, no breaking news.
No one is acting
as if we were inacrisis.
Even most climate scientists
or green politicians
စိမ်းလန်းရေး နိုင်ငံရေးသမား အများစုတောင်
keep on flying around the world,
eating meat and dairy.
အသားနဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ စားနေကြတုန်း။
If I live to be 100,
I will be alive in the year 2103.
ကျွန်မ အသက် ၁၀၀ ထိနေမယ်ဆိုရင်
When you think about the future today,
you don't think beyond the year 2050.
ဒီနေ အနာဂါတ်အကြောင်းကို စဥ်းစားရင်
By then, I will, in the best case,
not even have lived half of my life.
ကျွန်မ သက်တမ်းတစ်ဝက်တောင်နေရမှာ မဟုတ်ဘူး။
The year 2078, I will celebrate
my 75th birthday.
၇၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို ကျင်းပမယ်။
If I have children or grandchildren,
maybe they will spend that day with me.
သူတို့တွေ အဲ့နေ့ ကျွန်မနဲ့ တူတူရှိကြမယ်။
Maybe they will ask me about you,
the people who were around, back in 2018.
Maybe they will ask
why you didn't do anything
while there still was time to act.
What we do or don't do right now
will affect my entire life
အခု လုပ်မယ် မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စက
ကျွန်မ တစ်ဘဝလုံး ထိခိုက်လိမ့်မယ်။
and the lives of my children
ကျွန်မရဲ့ ကလေးတွေနဲ့ မြေးတွေရဲ့ ဘဝတွေရောပ။
What we do or don't do right now,
ကျွန်မတို့ အခု လုပ်မယ် မလုပ်ဘူး ကိစ္စက
me and my generation
can't undo in the future.
ကျွန်မရဲ့ မျိုးဆက်တွေ ပြန်ပြင်လို့မရဘူး။
So when school
started in August of this year,
ဒါနဲ့ ဒီနှစ် ဩဂုတ်လ ကျောင်းစတော့
I decided that this was enough.
I set myself down on the ground
outside the Swedish parliament.
ကျွန်မ ဆွီဒင် လွှတ်တော်အပြင်က
I school striked for the climate.
ရာသီဥတု အတွက် ကျောင်းမတက်ဘဲ ဆန္ဒပြခဲ့တယ်။
Some people say that I
should be in school instead.
တစ်ချို့လူတွေက ကျွန်မ ကျောင်းမှာပဲ
Some people say that I should study
to becomeaclimate scientist
တစ်ချို့လူတွေက ကျွန်မ ရာသီဥတုသိပ္ပံပညာရှင်
ဖြစ်အောင် သင်ယူသင့်တယ် ပြောကြတယ်။
so that I can "solve the climate crisis."
ရာသီဥတု အရေးပေါ် ပြဿနာကို
But the climate crisis
has already been solved.
ဒါပေမဲ့ ရာသီဥတု အရေးပေါ် ပြဿနာက
all the facts and solutions.
to wake up and change.
And why should I be studying forafuture
that soon will be no more
ဘယ်သူမှလည်း အနာဂါတ်ကို ကယ်ဖို့
when no one is doing anything
whatsoever to save that future?
ကျွန်မက သိပ်မကြာခင်မှာ မရှိတော့မယ့်
အနာဂါတ် အတွက် ဘာလို့စာသင်နေမှာလဲ။
And what is the point of learning facts
when the most important facts
သိပ္ပံပညာရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အချက်တွေက
given by the finest science
of that same school system
clearly means nothing
to our politicians and our society.
Some people say that Sweden
is justasmall country,
and that it doesn't matter what we do,
but I think that ifafew children
can get headlines all over the world
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မကတော့ ကလေးတစ်ချို့
just by not coming to school
forafew weeks,
imagine what we could all do
together if you wanted to.
ဆိုရင် လုပ်နိုင်တာတွေ စဥ်းစားကြည့်ပါ။
Now we're almost at the end of my talk,
and this is where people
usually start talking about hope,
solar panels, wind power,
circular economy, and so on,
လှည့်ပတ်နေတဲ့စီးပွားရေး စတာတွေ ပြောကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ အဲ့တာတွေ မလုပ်တော့ဘူး။
We've had 30 years of pep-talking
and selling positive ideas.
ရောင်းနေတာ နှစ် ၃၀ ရှိပြီ။
ဒါပေမဲ့ အဲ့တာ အလုပ်မဖြစ်ဘူး။
Because if it would have,
အကြောင်းက တကယ် အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်
the emissions would have gone down by now.
And yes, we do need hope,
But the one thing we need
more than hope is action.
Once we start to act,
hope is everywhere.
So instead of looking for hope,
look for action.
Then, and only then, hope will come.
Today, we use 100 million
barrels of oil every single day.
ဒီနေ့ ကျွန်မတို့တွေ ရေနံစည်ပေါင်း
သန်း ၁၀၀ လောက်သုံးနေကြတယ်။
There are no politics to change that.
ဒါကိုပြောင်းဖို့ နိုင်ငံရေးေ မရှိသေးဘူး။
to keep that oil in the ground.
ထားဖို့ စည်းမျဉ်းတွေ မရှိသေးဘူး။
So we can't save the world
by playing by the rules,
ဒီတော့ စည်းမျဉ်းတွေ လိုက်နာနေရုံနဲ့
because the rules have to be changed.
Everything needs to change --
and it has to start today.
ပြီးတော့ ဒီနေ့ပဲ စရလိမ့်မယ်။
Translated by Willy Mandrake
Greta Thunberg: ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ် ယခုချက်ချင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် အရေးပေါ်ကိစ္စ။ | TED Talk | TED.com